China Bentonite Clay Powder ngeenwele / ubuso / amazinyoUkuveliswa kunye neFektri | Xinzheng
I-bentonite powder powder iyiminerali engeyiyo yentsimbi kunye ne-montmorillonite njengeyona nto iphambili yezimbiwa. Ubume be-montmorillonite lu-2: 1 uhlobo lwekristale eyakhiwe zii-tetrahedrons ezimbini ze-silicon-oxygen kunye nolwahlulo lwe-octahedron ye-aluminium. Kukho iindawo ezithile kulwakhiwo olucwecwe, ezinje ngeCu, Mg, Na, K, njl., Kunye nokunxibelelana kwezi kethi kunye neseli yeyunithi ye-montmorillonite akuqinisekanga, kwaye kulula ukuba kutshintshwe ngezinye iications. Unonxibelelwano olufanelekileyo lwe-ion. Amazwe angaphandle asetyenziswe kumasebe angaphezu kwe-100 kwiindawo ezingama-24 zemveliso yezolimo kunye nezolimo, kwaye kukho iimveliso ezingaphezulu kwama-300, ke abantu bayibiza ngokuba "ngumhlaba jikelele."
Ukungeniswa kwe-bentonite powder
Ukusetyenziswa komgubo wodongwe we-bentonite
1. Ukongeza umgubo wodongwe we-bentonite kwinkqubo yokuvelisa ye-ceramic kwandisa ukubakho kweplastikhi kunye namandla omzimba wombungu okanye i-glaze, kuyonyusa kakhulu umphumo wokuthambisa, kwaye kuyanceda ekugayeni ibhola. Ukongeza, ukumiswa kunye nozinzo ziphuculwe kakhulu, i-porcelain intekenteke, ithoni yombala ithambile, kunye ne-glaze Umatshini ugudile, ngokukhanya okuhle kokuhambisa, ukungqubana, kunye nenqanaba elithile lamandla oomatshini.
2. Kulwakhiwo lokombiwa kunye nokufumba, umgubo wodongwe we-bentonite unokumiswa okuhle, i-thixotropy, ilahleko ephantsi yeefilitha, intsebenzo elungileyo yokwenza izinto ngokulungiselela, ukulungiswa okufanelekileyo, uhlengahlengiso olulula lomxhuzulane othile wokombiwa kolwelo, njl. ubunzulu bezinto zobunjineli bokugrumba.
Egqithileyo Iitafile zamatye eziSintwe zanamhlanje zexabiso lokuhombisa ekhaya
Okulandelayo: umoya owomileyo wodongwe wodongwe othengiswayo